र्याप्चर आउँदै छ। BNL Ministries - ne01
मलाकी 4:5-6 परमेश्वरले हामीलाई प्रभु को ठूलो र डरलाग्दो दिन अघि एलियाको पठाउन बताए। शिक्षकहरूको पहिला एलिया थियो भने किन येशूले सोध्नुभयो थियो, त्यो एलिया आउन र सबै कुरा पुनर्स्थापना भनी बताउनुभयो। त्यसपछि उहाँले एलियालाई पहिले नै आएका थिए भनेर भन्नुभयो र उहाँलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पहिचान। यूहन्ना आग्रह गरियो "जब तपाईं को हुन्?" उहाँले "म उजाडस्थानमा रोइरहेको एक को आवाज हुँ" भन्नुभयो। यो यशैया 40:3। त्यसैले एलियाको आत्मा अभिषिक्त एक मानिस आउँछन् र "बहाल" थियो थियो। म विलियम Branham त्रुटि मा बन्द गएका थिए भन्ने कुरा बहाल गर्न भनेर अगमवक्ता थियो भन्ने विश्वास गर्छन्। तपाईँले त्यो अनौठो सुनिन्छ सोच्न सक्छ, तर परमेश्वरले यस दर्शन, अलौकिक कार्यहरू, (पछि डाक्टरहरूले प्रमाणित) मरेका समेत स्थापना संग, कुनै साधारण सेवाको थियो कि फेरि समय र समय साबित भयो। हामी येशूको आगमनको समय मा सही हो - प्रभु दर्दनाक दिन।
सन् 1946 मा एक रात प्रभु को स्वर्गदूतले तिनलाई सामना गर्न सामना भेट र उनले संसारलाई ईश्वरीय निको को एक उपहार लिन नियुक्ति भएको भन्नुभयो। स्वर्गदूतले उहाँले परमेश्वरको देखि पठाइयो प्रमाणित गर्न दुई संकेत दिएको हुनेछ भन्नुभयो। उहाँले चाँडै पहिलो संकेत, स्वभावैले, शारीरिक उहाँको हृदयलाई आफ्नो हात माथि परिभ्रमण आफ्नो घातक रोगहरू कंपन महसूस, बिरामी मान्छे को हात पकड, थकाइलाग्दो थियो भनेर पत्ता लगाए। उहाँले चक्कर लाग्यो र थकान देखि गर्थे लगभग बेहोश सम्म आफ्नो सेवकाईको ती प्रारम्भिक दिन उहाँले एक रात सयौं मानिसहरू लागि प्रार्थना थियो। त्यसपछि दोस्रो चिन्ह आयो र यो अधिक शारीरिक तवरमा थकाउने पहिलो संकेत भन्दा साबित भयो। पवित्र आत्माको अभिषेक मान्छे को समस्या बुझ्न थाल्दा, प्रत्येक दर्शन मात्र एक रात लगभग 15 20 मान्छे को लागि प्रार्थना सक्छ कि आफ्नो धेरै शक्ति भोकमरी। स्वर्गदूतले त्यो मान्छे उसलाई विश्वास गर्न प्राप्त गर्न सक्छ, कुनै रोग तिनको प्रार्थना प्रतिरोध सक्छ भन्नुभयो। उहाँले मानिसहरू आफ्नो नम्र स्थिति को उहाँलाई विश्वास छैन भनेर विरोध गरेका थिए, तब परमेश्वरले आफ्नो जिम्मेवारी प्रमाण लागि दुई संकेत जोडी थियो।
आगो को खामो।
हस्टन, जनवरी 1950 मा टेक्सास मा, एउटा अचम्मको फोटो पनि डगलस स्टूडियोज लिएको थियो। यो फोटो मा फारम जस्तै एक विशेष चमक मा भाइ Branham को टाउको माथि ज्योति पनि देखियो। नकारात्मक ज्योति अनुचित जोखिम, विकास वा परिष्करण को परिणाम हुन सक्छ कि न त निर्धारण गर्न प्रश्न कागजात जाँच थियो जर्ज जे लैस, द्वारा जांच थियो। यो अनुसन्धान पूर्ण चमक नकारात्मक प्रहार ज्योति कारण थियो, तथ्य प्रमाणित हुन्थ्यो। मात्र अलौकिक अस्तित्व कहिल्यै छायांकन रूपमा यो चित्र, वासिङ्टन डीसी धार्मिक कला को हल मा झुण्ड्याइएको छ।
केही समयअघि Feb 28 1963, एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका भर उतरतिर बह एक बिछट्टै सुन्दर र रहस्यमय बादल सूर्यास्त हुनुभन्दा। दुई पत्रिकाहरू यो अनौठो घटना को चित्र र रिपोर्ट गरे। (विज्ञान पत्रिका 19/4/63 र जीवन पत्रिका 17/5/63) ब्याज लागि कारण विशाल बादलले कुनै चिस्यान बादलले गठन गर्ने प्रेमभन्दा मा एक उच्च ऊंचाई मा एक नीलो आकाश झुन्ड्याएर थियो। कुनै सम्भाव्य व्याख्या यसलाई मा वैज्ञानिक पूछते दिएको, तर संसारमा अज्ञात डिसेम्बर 22, 1962 मा, बादल देखा दुई महिनाअघि भाइ Branham उहाँले Jeffersonville मा आफ्नो मण्डलीको सम्बन्धित जो दर्शन पाएको थियो गरिएको छ। आफ्नो दर्शनमा घटनाहरू अचानक पारित गर्न आउँदा
मा भाइ Branham Tuscon, एरिजोना, वरपरका पहाडहरू मा शिकार थियो। सात साना डट्स यी डट्स धारण रूपमा, सात स्वर्गदूतहरू को एक पिरामिड उहाँको सामु खडा, उसलाई माथि आकाश मा देखियो। तिनीहरूले प्रकाश पुस्तकमा को सात वटा प्रकट गर्न उहाँलाई एक आयोग दिनुभयो। यी स्वर्गदूतहरू तिनीहरूले अनौठो बादल गठन छोड्दा यो थियो। बादल मा ख्रीष्टको अनुहार छ।
डाउनलोड। ( अंग्रेजी। ) "Is this the sign of the end Sir"
( अंग्रेजी। ) मा खाता पढ्नुहोस् ... The acts of the Prophet - Pearry Green.
सम्बन्धित सन्देशहरू डाउनलोड...
परमप्रभुले भन्नुभयो, “हेर, म अगमवक्तालाई तिमीहरू कहाँ पठाउँनेछु। परमप्रभुबाट त्यो महान अनि भयंकर न्यायको पहिला नै आउँनेछ।
एलियाले माता-पितालाई आफ्नो नानीहरू ल्याउँनमा सहाएता गर्नेछ। यो अवश्य घट्नेछ र म आउँनेछु र सम्पूर्णरूपले तिम्रो देशलाई नष्ट पार्नेछु।
त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा।
खोपडी को ठाउँ।
( फोटो 1941 मा लगियो। )
(PDF अंग्रेजी। )
Story.(PDF - अंग्रेजी।)